विराटनगर समाचार – Page 13 – Makalu Television
Home > विराटनगर समाचार (Page 13)
विराटनगर, २० पुष । नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले दुई जना सञ्चारकर्मी र एक जना कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरेको छ । आज विराटनगरमा भएको शाखाको १३ औँ साधारण सभाको अवसरमा सञ्चारकर्मी तारा आचार्य र ध्रुव भट्टराई तथा कर्मचारी दिपक फुयाँललाई नगदसहित पुरस्कृत गरेको हो । भट्टराईलाई ११ हजार राशी रहेको नगर विकास
December 25, 2018 आर्थिक समाचार, मुख्य समाचार, विराटनगर समाचार	0
विराटनगर, १० पुष । विराटनगरमा जारी विराट ट्रेड एक्सपोमा राखिएको विदेशी स्टलहरु आम उपभोक्ताको आर्कषणको केन्द्र बनेको छ । एक्पोमा स्टल राख्न आएका विदेशी ब्यापारी समेत उपभोक्ताको रुझानबाट उत्साहित छन । पौष ६ गतेबाट शुरु भएको विराट ट्रेड एक्सपोमा दैनिकरुपमा उपभोक्ताको चाप बढदो छ । एक्सपो अवलोकन गर्न आउने आम उपभोक्ताले
नेपाल पत्रकार महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलन विराटनगरमा
December 20, 2018 December 20, 2018 राष्ट्रिय समाचार, विराटनगर समाचार	0
विराटनगर, ५ पुष । व्यवसायिक पत्रकारिताको आधार, प्रेस स्वतन्त्रता र श्रम अधिकार भन्ने नाराका साथ नेपाल पत्रकार महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलन विराटनगरमा आज सुुरु भएको छ । सम्मेलनमा मुुलुुकभरका नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष पदाधिकारी, महासंघका प्रदेश अध्यक्ष तथा जिल्ला सभापतिगरि दुुईसय भन्दा वढिको सहभागिता रहेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रिय
December 19, 2018 राष्ट्रिय समाचार, विराटनगर समाचार	0
विराटनगर, ४ पुष । प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने उद्देश्यले विराटनगरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एकदिने वर्डप्रेस सम्मेलन हुने भएको छ । आयोजक समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी यही पुस ७ गते सम्मेलन हुने जानकारी गराएको हो । संसारको सबैभन्दा प्रख्यात वेबसाइट बनाउने वर्डप्रेस सम्मेलनमा प्रविधिसम्बन्धी चर्चा र प्रशिक्षणलगायतका कार्यक्रम हुने जनाइएको छ । पत्रकार
विराटनगर, ४ पुष । विराटनगरमा आयोजना हुने विराट ट्रेड एक्सपो २०१८ तथा अन्तरराष्ट्रिय ब्यापार मेलाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मेलामा नेपालभारत सहित तेश्रो मुलुकका स्टल समेत रहने छन । मोरङ ब्यापार संघको अगुवाईमा यहि पुस ६ गतेदेखि १४ गते ९ दिनसम्म विराटनगरमा आयोजना हुने विराट एक्सपो ब्यापार मेलाको तयारी
निर्मला निम्ति बालबालिकाहरुको प्रदर्शन
December 17, 2018 राष्ट्रिय समाचार, विराटनगर समाचार	0
विराटनगर, २ पुस । बलात्कार पछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तलाई न्याय दिन माग गर्दै आज बालबालिकाहरुले विराटनगरमा शान्तिपूर्ण र्याली प्रदर्शन गरेका छन् । विराटनगरस्थित ग्रेडेड बोर्डिङ स्कुल र बाल्मीकी सेकेण्डरी इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका विद्यार्थीहरुले निर्मलाका लागि सरकार संग न्याय माग गर्दै शान्तिपूर्ण र्याली प्रदर्शन गरेका हुन । विराटनगरको मुख्य बजार र
विराटनगर, २८ मंसिर । विराटनगरमा निर्माणाधिन सेन्ट्रल मलमा आजबाट सेन्ट्रल मल्टिप्लेक्स अत्याधुनिक प्रविधिको सिनेमा हल संचालनमा ल्याइएको छ । विशाल ग्रुप,देवेनरा ग्रूप र हाइलाईफ ग्रूपले संयुक्तरुपमा एक अर्बको लगानीमा निर्माणाधिन मल भित्र ११ करोडको लागतमा मल्टिप्लेक्स संचालनमा ल्याइएको हो । विराटनगर ७ स्थित मल परिसरमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनपछि सो मल्टिप्लेक्स
December 7, 2018 December 7, 2018 मुख्य समाचार, विराटनगर समाचार	0
विराटनगर, २१ मंसिर । पब्लिक फोरमको अध्यक्षमा पुनः उत्तम ढुंगेल निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ । फोरमको दशौ बार्षिक साधारणसभाबाट अध्यक्षमा ढुंगेल निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको हो । आज भएको भएको भेलाले ११ सदस्यीय नयां केन्द्रिय कार्य समिति पनि गठन गरेको छ । नयाँ समितिको उपाध्यक्षमा अमलेश कर्ण, सचिवमा लवकुमार ताम्राकार र सहसचिव
कोशी अञ्चल अस्पताललाई विराटनगर महानगरपालिकाले दियो ३ लाख ५० हजार बराबरको ए.सी.
December 4, 2018 December 4, 2018 मुख्य समाचार, विराटनगर समाचार	0
विराटनगर, १८ मंसिर । विराटनगर महानगरपालिकाले कोशी अञ्चल अस्पताललाई ३ लाख ५० हजार मूल्य बराबरको ए.सी. सहयोग गरेको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले आज कोशी अञ्चल अस्पतालका मेसु डाक्टर रोशन पोखरेललाई अस्पताललाई चाहिने ५ वटा ए.सी हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । मेसु पोखरेलले बच्चा वार्ड र लेबर रुममा ए.सी नभएकाले सुत्केरी
विराटनगरमा पनि कर दिवस मनाइयो
November 17, 2018 राष्ट्रिय समाचार, विराटनगर समाचार	0
विराटनगर, १ मंसिर । सातौं कर दिवशका अवसरमा आज आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरको आयोजनामा प्रभातफेरीको आयोजना गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरबाट निस्केको प्रभातफेरीले बुधहाट चौक, गोल्छा चौक, सिडियो कार्यालय हुँदै नगरका विभिन्न भागको परिक्रमा गरेको थियो । प्रभातफेरीमा सहभागीहरुले कर तिरौं राष्ट्र निर्माणमा सहभागी बनौं, राजस्वमा वृद्धि संघीय राज्यको